Wiil somalida Sweden ah oo ku dhintay dagaalada Soomaaliya - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Mid kamid ah kooxaha alshabab
En ung svensk-somalisk man har dött i strider i Somalia
Wiil somalida Sweden ah oo ku dhintay dagaalada Soomaaliya
La daabacay onsdag 29 juli 2009 kl 14.21
Mid kamid ah wiilasha dhalinyarada soomaaliyeed ee heysta dhalashada Iswidhish-ka ayaa la sheegay inuu tagay dalka Soomaaliya isagoo ka bar bar dagaalamaya kooxaha Alshabab ku dhintay. Arrintan ayaa waxa idaaacada caalamiga ah ee Radio Sweden u xaqiijiyey booliska dalkan xagga amniga u qaabilsan ee Säpo.
Booliska ayaa sheegay in wiilkaasi dhintay horaantii bishan julay markii u bar bar dagaalamayey kooxahaasi Alshabaab. Wiilkan dhalinyarada ah ayaa yimid dalkan isagoo dhalinyaro ah, waxaana uu kamid ahaa kooxo dhalinyaro ah oo dooneysay iney badasho bulshada, sidaasi waxaa yiri madaxa falan qeeyaha arrimaha aragagaxisada ee booliska.
Boolisku amnigu waxey sheegeen in tirada shaqsiyaadka ku dhintay dagaalada Soomaaliya iney yihiin " Gacan muggeed" Mid kamid waalidiinta dhalintaasi oo idaacada u waremeysay ayaa sheegtay in loo jiitay ama loo qal qaaliyey in dagaaladaasi ka qeybgalo.
" Maalmihii ugu dambeeyey waxaa uu dareemeyey liidasho waxaana uu bilaabay inuu meelo isku xir xiro" ayey tiri hooyadaasi. Kooxaha Alshabaab ayaa la sheegaya iney isku dayayaan iney soo jiitaan dhalinyarada Sweden. Muddo haatan toddobaadyo laga joogo waxaa jidka suuqa Rinkeby taagnaa nin ka tirsan Alshabab kaasoo afar dhalinyaro u sheegay inuu siinayo tigidho bilaash oo ay ku tagayaan Soomaaliya si ay u difaacaan Diintooda. Mid kamid ah afartaasi dhalinyarro ayaa idaacada caalamiga ah ee Radio Sweden u xaqiijiyey.
"Aragti ahaan ee u hamuun qaba iney Soomaliya ku soo tababartaan si ay u dagaalamaan, qatarna ay u geliyaan Sweden" ayey tiri Malena Rembe.
"Waxa aan ka cabsi qabno waxey tahay iney abuurtaan shabakad, qibrad iyo waxbarasho kuwaasoo lugu adeegsan karro marka ay soo laabtaan"